[ June 20, 2021 ] आज नायक शिव श्रेष्ठको जन्मदिन, बार अनुसार लगाउँछन् उनी पहिरन समाचार
Homeसमाचारयस्तो सहमति पछि उठ्यो कञ्चनको श’व, अन्त्य’ष्टिमा पुरै गाउँ शोकाकुल (भिडियो हे’र्नुहोस्)
March 9, 2021 admin समाचार 2013
अस्पतालमा दुई महिना भन्दा बढी उ’पचारको लागि अस्पताल बसाई पछि अस्ताएका कञ्चनको मंगलवार अ’न्त्यष्टि भएको छ । आइतवार नि’धन भएका कञ्चनको श’व उनको श्रीमती भनिएकी युवतीको घरमा लगेर आ’फन्तले राखेका थिए । अनिशाले कञ्चनको श्रीमती भएर हिन्दु धर्म अनुसार मा’न्नुपर्ने परम्परा पुरा ग’र्नुपर्ने माग कञ्चनको परिवारको थियो ।
सोही माग लिएर उनीहरु यति धेरै दिन देखि अनिशाको घर अगाडी आ’न्दोलन गर्न पुगेका थिए । तर कञ्चनको श’व धेरै दिन बाहिर राख्दा वि’ग्रन थालेपछि प्रहरीको रोहवरमा भएको सहमति अनुसार श’व उठाइएको हो । मंगलवार देवघाटमा कञ्चनको अ’न्त्यष्टि गर्ने सहमति अनुशार अनिशाको घरवाट श’व उठाइएको हो । लामो समयसम्म छोराको उपचारको लागि अस्पतालमा बसेकी आमा नि’धन पछि एक्लिएकी छन् ।
श्रीमानको सहयोग बिना एक्लै हुर्का’एकी छोराको पनि साथ छुटे’पछि कञ्चनको आमा ए’क्लिएकी हुन् । उनको बेहा’ल भएको छ । ६६ दिनको लामो बे’होसी जिन्दगीपछि कञ्चनले आइतबार अन्तिम सास फेरे । अस्पतालको आइसियुमा बोल्न र हेर्न न’सक्ने अवस्थाका कञ्चनले बि ष ‘पि ए का थिए । उनले अनिशा कुमालसँग प्रेम विावह गरेका थिए तर ल’गत्तै माइती पक्षको फरक ब्यवहारपछि उनले यस्तो क’दम उठाएका थिए ।
पूर्वी चितवनका कञ्चन तिमल्सिना र अनिशा कुमालको प्रेम प्रसंगले २ महिना यता ठू’लो चर्चा पायो । काठमाडौँमा विवाह गरेर चितवन गएपछि अनिशा आफ्नै घर फर्कि’इन् । त्यस पछि वि’ग्रिएको सम्बन्धले कञ्चनको इहलिला नै स’माप्त गरिदियो ।
कालिका नगरपालिका–६ खोलेसिमल गुराउचौरमा प्रेम स’म्बन्धमा रहेका कञ्चनलाई अनिशाको परिवारले अ’लग गराइ दिएको थियो । उपचारका क्रममा ६६ दिनपछि उनै २१ वर्षीय कञ्चनको भरतपुर अस्पतालमा मृ’त्यु भएको हो । कञ्चनको मृ’त्यु भएपछि मृ’तकका आफन्तले १७ वर्षीया अनिशाको घर घेरे’का हुन् । – इताजा खबरबाट
शरिरको कुनै अङग न’चल्ने कृष्णले गाला र चिउडोले गर्छन सब काम गर्छन् (भिडियो सहित)
सुनको भाउ छ सयले घट्यो, तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ ?
अभिनेता पल शाहले दशैंमा सियोना श्रेष्ठलाई पठाए एक लाख रुपैया दक्षिणा (भिडियो हेर्नुहोस)
October 28, 2020 admin समाचार 5741
अभि’नेता पल शाह र उनको प’रिवारले पोल्याण्डमा उपचार गरा’ईरहेकी बालिका सि’योना श्रेष्ठको लागि एक लाख रुपैया द’क्षिणा स्वरुप पठाएको छ । दशैंको उपल’क्ष्यमा एक भिडियो सार्व’जनिक गर्दै पल शाहको ब’हिनी रोशनी शाहले त्यसवारे जा’नकारी गराएकी
December 22, 2020 admin समाचार 3394
बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा कारोबार भइरहेको छ? हेर्नुहोस्
February 7, 2021 admin समाचार 2989
नेपाली बजारमा आज सु’नको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापवा’ल सुन ६०० रूपैयाँले बढेर ९० हजार ६०० रूपैयाँ कामय गरिएको छ । तेजाबी सुनको मूल्य पनि आज ६०० रू’पैयाँले बढेर
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (194058)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (186658)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (186182)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (186121)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (184280)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (184064)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (182624)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (181719)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (175314)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (151914)